Bonucci Oo Ay KA Go’an Tahay Xirashada Maaliyadda Man City, Lana Shaqeeyo Pep Guardiola » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ Italy/Bonucci Oo Ay KA Go’an Tahay Xirashada Maaliyadda Man City, Lana Shaqeeyo Pep Guardiola
Si banana yaal ah Juventus difaaceeda Leonardo Bonucci ayaa bannaanka soo dhigay sababta loogu dhoweynayo in uu ku biiro kooxda Manchester City waxaana uu shaaca ka qaaday in uu jecelyahay isagu la shaqeynta macallinka reer Spain ee Pep Guardiola.
Laacibka xulka Italy ayaa aad loogu dhoweynayay in uu aado Etihad Staidum Sanadkii hore, markii uu ninka reer Catalan qabtay hoggaanka kooxda Blues, kooxda Manchester ayaa waxay dooneysaa waqtigan daaqadda kala gadashada ee furmeysa in ay uga faa’iideysato saxiixa laacibkan.
Daily Star ayaa daabacday in Leonardo Bonucci uu rajo wanaagsan ka qaba in uu ku biiro kooxda Manchester City, kana hoos shaqeeyo macallinka Taatikada fiican ee Pep Guardiola. Majaladda Biritishka ah ayaa warisay in xiddigga reer Italy uu diyaar u yahay la shaqeynta macallinka reer Catalan kaasoo yimid Etihad Stadium xagaagii hore dhammaadkiisa.
​Sidaas awgeed, Guardiola ayaa dhankiisa diyaariyay € 60 milyan oo Yuuro, si uu saxiixa laacibkan ula wareego isagoo sheegaya in uu Juventus ka wareejin doono difaac muhiim u ah habkeeda difaaca 3-da dambe, Bonucci ayaa dadka qaarkood u arkaan in uu yahay laacib aan laga dhaqaajin Karin kooxdiisa Marwada Duqda ah.
Si kasta Serie A kooxda hoggaamineysa, ayaa mar horay u sheegtay in aysan iska iibin doonin difaaceeda. Horay ciyaartoy dhowr ah oo ay sidan u sheegtay ayaana lagala wareegay sida Arturo Vidal, Kingsley Coman iyo Paul Pogba.